IZAKHAMUZI ZOMTHETHO NGOKUSETSHENZISWA kweCyprus | IZINGA 100% LOKUPHUMELELA | OKUTHENGEKAYO | Faka isicelo sobuzwe ngokutshalwa kwezimali eCyprus, ubuzwe ngokutshalwa kwezimali eCyprus, ubuzwe ngezinhlelo zokutshala imali eCyprus, ubuzwe ngohlelo lokutshala imali eCyprus, okwesibili
Ubuzwe ngokutshalwa kwezimali eCyprus naseGolden Visa
● Ubuzwe ngokutshala imali eCyprus ngokutshala imali kwi-real estate
Khipha ku-internet Ama-ejenti wobuzwe ngokutshalwa kwezimali eCyprus kanye nabameli be Ubuzwe ngokutshalwa kwezimali eCyprus kanye nabashintshi bezindawo ezithengiswayo Izinhlelo zobuzwe eCyprus zisebenza ngokubambisana ekuvikeleni kwamakhasimende.
Ubuzwe ngabenzeli bezokutshalwa kwezimali eCyprus buhlinzeka ngezinsizakalo zokuhlala ngokutshalwa kwezimali eCyprus, Ubuzwe ngezinhlelo zokutshala imali eCyprus, Ubuzwe ngohlelo lokutshalwa kwezimali eCyprus, Ubuzwe bobabili ngokutshalwa kwezimali eCyprus, ubuzwe bobabili ngokutshalwa kwezimali eCyprus, ubuzwe nobuzwe ngokutshalwa kwezimali eCyprus , Ubuzwe obuhlala njalo ngokutshalwa kwezimali eCyprus, Ubuzwe besikhashana ngokutshalwa kwezimali eCyprus, Ubuzwe ngohlelo lokutshala imali eCyprus, Ubuzwe ngezinhlelo zokutshala imali eCyprus, Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali eCyprus, Ukuhlala kabusha ngezinhlelo zokutshala imali eCyprus, Ukuhlala kabusha ngohlelo lokutshala imali eCyprus, okwesibili Ukuhlala kabusha ngokutshalwa kwezimali eCyprus, ukuhlala kabili ngokutshalwa kwezimali eCyprus, ukuhlala kanye nokuba yisakhamuzi ngokutshala imali eCyprus, ukuhlala kanye nokuba yisakhamuzi ngokutshalwa kwezimali eCyprus, izinhlelo zokuhlala kwezomnotho eCyprus, Ukuhlala kabusha ngohlelo lokutshala imali eCyprus, Ukuhlala kabusha ngezinhlelo zokutshala imali eCyprus, okwesibili ipasipoti eCyprus, izinhlelo zepasipoti zesibili eCypr thina, uhlelo lwesibili lwamaphasipothi eCyprus, ipasipoti yesibili eCyprus, ukuhlala kanye nepasipoti yesibili eCyprus, ipasipoti yesibili yezokuxhumana eCyprus, ipasipoti yesibili ngokutshalwa kwezimali eCyprus, ipasipoti yesibili yobuzwe eCyprus, uhlelo lwesibili lwamaphasipothi eCyprus, amasu wepasipoti wesibili e I-Cyprus, i-visa yegolide eCyprus, i-visa yegolide eCyprus, izinhlelo ze-visa zegolide eCyprus, uhlelo lwe-visa yegolide eCyprus, i-visa yesibili yegolide eCyprus, uhlelo lwesibili lwe-visa egolide eCyprus, i-visa yegolide emibili eCyprus, ubuzwe kanye ne-visa yegolide eCyprus ukuhlala ne-visa yegolide eCyprus, ubuzwe be-visa yegolide eCyprus, uhlelo lwe-visa egolide eCyprus, izikimu ze-visa zegolide eCyprus.
"1 izixazululo zokumisa" zabo bonke ubuzwe bakho ngokutshala imali eCyprus ngokuxhaswa okwengeziwe.
Ukutshalwa Kwezimali Okuncane eCyprus kobuzwe ngokutshalwa kwemali: EUR 2.15 million
Isingeniso iCyprus kanye nobuzwe ngokutshalwa kwezimali
I-Jewel yeMedithera, noma iRiphabhlikhi yaseCyprus, iyizwe elincane eliyisiqhingi, elitholakala eningizimu yeTurkey futhi ngaseningizimu-mpumalanga yeGreece kuphela. Kuyisiqhingi sesithathu esikhulu kunazo zonke oLwandle iMedithera, ngemuva kweSardinia neSicily, maqondana nenani labantu njengesifunda. ICyprus ibekwe ngamabomu lapho kuhlangana khona izindawo ezintathu zomhlaba: iYurophu, i-Asia ne-Afrika. Le Colony yaseBrithani yangaphambilini, eyathola ukuzibusa kwayo ngo-3, ibiyindawo eyaziwayo yokuthakaselwa isikhashana manje. Lesi siqhingi ngokwengeziwe besilokhu sanda ukubhebhetheka okukhulu njengenhloso ye-ex-pat nabantu abavela kuyo yonke indawo umhlaba.
ICyprus iyikhaya lolwandle oludlulela ebangeni elibalulekile, amanxiwa ongadlula kuwo, ushizi omuhle, negama lewayini elisungulwe kakhulu emhlabeni (Commandaria). Esikhundleni sobukhulu bayo, iCyprus inomlando omkhulukazi. EPaphos, uzodlula ezinsaleleni ezinokwethenjelwa zakudala ngenani elithile lezitolo zokugcina izinto njengesiza semivubukulo esibuyele emuva ngekhulu lesine leminyaka BC. Izingxenye ezisele zokuhlala ezindala zasebukhosini, okuthunyelwe, nezindawo zokungcwaba kunikeze leli dolobha isikhundla seSiza Samagugu Esizwe se-UNESCO. Lesi siqhingi ngokufanayo saziwa njengesinye sezindawo eziyishumi eziyishumi eziphonseka emhlabeni.
Ngokusobala, ukuhlangana futhi uthuthele kwenye, indawo engaziwa akulula. Lokhu kusebenza ikakhulukazi eCyprus ngoba abantu abacabangi okuningi ngesizwe. Kodwa-ke, abaphathi bakhethelwa lesi siqhingi baqinisekisa ukuthi bathokoze ngendlela eyisimanga futhi banelisekile ngekhaya labo elisha.
Uma kwenzeka ufuna enye inhloso ye-ex-pat, gcina njengokukhathazeka okuyinhloko ukuthi kunamaphuzu ahlukahlukene anentshisekelo yokuzinza eGugu lamaMedithera, njengomuntu njengomndeni. Zama ukuqhubeka ukuthola izizathu ezi-5 ezinhle kakhulu zokuthi kungani ukuthuthela eCyprus kuzothuthukisa impilo yakho:
Abagqugquzeli kanye Nokweqa Kwentela Kubathengi Basemakhaya
Ukudonswa kwangempela kwabanikazi bempahla ewubukhazikhazi ezahlukahlukene emhlabeni jikelele yizinhlobonhlobo zezikhuthazo abazithola kuziphathimandla zomphakathi, kufaka phakathi ukuncishiswa kwentela, amatayitela engxenyeni enkulu yezindleko, kanye nethuba lokuthola iPasipoti ye-EU.
Izindleko zomhlaba azikhuphukile kakhulu selokhu kwabola okuyingozi ngesikhathi sezimali eziphuthumayo zango-2008 futhi kunenqwaba yamakhaya alindile. Kunoma ikuphi, kunezinkomba zokulungiswa, ikakhulukazi ngenxa yezimpikiswano zikahulumeni. Ngo-2015, ochwepheshe baqamba uhlelo olufushane, banciphisa kakhulu izindleko zamatayitela. Omele uMnyango Wezezimali kusukela ngasekupheleni uzwakalise ukuthi lokhu kugqugquzelwa kungaphela isikhathi eside. Ubuye futhi wakhuluma ngomunye umthetho ozokwethulwa, ozokwehlisa ukukhokhiswa kwempahla cishe ngama-75% futhi mhlawumbe uphinde uyiqede ngokuphelele ngo-2017.
Ngokomthetho, noma yimuphi umuntu odlula izinsuku ezingaphezu kwezingu-183 ngonyaka kulesi sifundazwe ufanelekile ukuba ngumuntu ozohlala kulo msebenzi. Lokhu kusho ukuthi kufanele ukhokhe izindleko kunoma yiziphi izinkokhelo ozithola endaweni yangakini nakwamanye amazwe. Yize kunjalo, izakhamizi zaseBrithani ezikule ndawo yokuhlala azidingi ukukhokha imali eyengeziwe eCyprus ngokunikezwa kwezinsizakusebenza zabo zaseBrithani; bavele banxephezele ukuphathwa kwabo (UK) ukukhokhisa ngokunyuka okuqongelelwe ngemuva kuka-Ephreli 2015 (okuyiphuzu lapho ochwepheshe bashintsha khona imithetho yokuqoqwa kwentela yabanini bomhlaba baseBrithani abahlala phesheya).
Abangaphandle ngokungangabazeki bangathenga indlu noma bathenge umhlaba futhi bakhe ikhaya kulesi sizwe. Izindleko zomhlaba zinengqondo kakhulu uma ziqhathaniswa ne-US, UK kanye namazwe amaningi ahlukene. Izindleko ezijwayelekile zendlu ohlangothini lwesiGreki saseCypriot esiqhingini cishe zingama-US $ 110,000 (£ 88442, € 98206) ngaphezu kwesibopho sesitembu. Ngokwengeziwe, amabhange angomakhelwane nasemhlabeni wonke ingxenye enkulu enza ama-70% wokulinganiselwa okuphelele kwempahla.
Indlela eya ekuthengeni indawo eCyprus ingathatha ukupela; kungathatha ngaphezulu kwezinyanga ezintathu ukuthi uxazulule izingxoxo. Lokhu ngokuyinhloko kungumphumela oqondile wesicelo esiyisibopho okudingeka usenze eMkhandlwini Wongqongqoshe. Kunoma ikuphi, umjikelezo ucacile futhi ulula, inqobo nje uma uthola indawo ezokusiza ngemibhalo.
Imini eyanele namazinga okushisa afudumele
ICyprus yazisa isimo sezulu saseMedithera esinamahlobo ehlobo nobusika obumnandi bangempela. Indawo eseduze kwesizwe nenkabazwe ithonya izinga lokushisa nomoya waso ojwayelekile. Izakhamizi zakulesi siqhingi ziba nezinsuku ezicishe zibe ngu-340 zokukhanya kwelanga ngonyaka.
Amahlobo aqhubeka okungenani izinyanga eziyi-7, aqale ngasekuqaleni kuka-Ephreli aqhubeke aze aphele ngo-Okthoba. Izinga lokushisa elijwayelekile lasemini lizungeze u-32ᵒ C kulezi zinyanga futhi likhuphukela ku-40ᵒ C noma kulo lonke izwe. Amazinga okushisa entwasahlobo asekelwa ngokwengeziwe yimimoya eshisayo eqala eNyakatho Afrika noma eMpumalanga Ephakathi. Izinga lokushisa lesikhathi sakusihlwa lingashintsha noma yikuphi phakathi kuka-13ᵒ C no-24ᵒ C, kuncike endaweni. Ihlobo aligcini nje ngokuba lishubile kepha libuye lome futhi. Ngempela, akuvamile ukubona ifu esibhakabhakeni kusukela ekuqaleni kukaJuni kuze kube semkhawulweni omkhulu ka-Septhemba.
Ilanga laphakathi nonyaka eCyprus lingamangalisa. Ngenkathi abantu abaningi bemunca imishayo, kuwukuhlakanipha ukugqoka isikrini selanga esiqinile njengezinto zokuzivikela (njengezambatho, amakepisi, nemithunzi) lapho uzulazula phakathi nesikhathi esiphakeme, esivame ukuhlala kusukela ntambama kuya ku-3: 30 PM. AmaSunbather kufanele nawo aphuze uketshezi oluningi ukuze angagcini esomile.
Ngentwasahlobo, izinga lokushisa elijwayelekile lasemini, ingxenye enkulu, lehlela ku-25 and C futhi ngaso sonke isikhathi esibandayo sonyaka, lingahle lize lifike ku-16 temperatures C. Amazinga okushisa esikhathi sakusihlwa angahle abe phansi njengo-9ᵒ C. By, by you, you Sizobona izinsuku ezikhanyayo sonke leso sikhathi kanye nemvula engapheli phakathi kukaNovemba noMashi.
Abantu baseCyprus bajabule ngendlela yokuthi esizweni sabo ungahamba ngokushushuluza futhi ungene olwandle ngasikhathi sinye. Kusukela ngoJanuwari kuya kuMashi abebephuma phambili baya ezintabeni zaseTroodos ukushushuluza kulandelwa ukubhukuda okuvuselelayo olwandle.
Amanani Obugebengu Obuphansi
ICyprus ihlukunyezwe yisizinda esivezwe ukungqubuzana okwedlulele phakathi kwamaGrikhi namaTurkey njengoba womabili la mazwe azamile ukuqinisekisa lesi siqhingi, ngaphandle komphumela ongangabazeki. Kodwa-ke, ihlala ingelinye lamazwe aphephe kakhulu e-Europe ukuhlala kuwo. Abaphenduki abahlukahlukene baseBrithani abebehlala esiqhingini saseMedithera isikhathi eside baqinisekisa ukuthi inhlalakahle nezokuphepha zaseCyprus ziphakeme kakhulu kune-UK.
Ngenkathi izibonelo zokugqekezwa okuncane kubalwa (ikakhulukazi ngabavakashi kanye nabashayayo) endaweni elandelanayo, amaphesenti obugebengu kulesi siqhingi aphansi. Abahloli ngale ndlela bakhuthazwa kakhulu ukuthi bagcine ubunikazi babo, imali kanye nempahla yabo endaweni evikelekile. Abahloli besifazane kufanele bazijwayeze izinyathelo ezijwayelekile zokuqapha abazenza kwesinye isizwe esingaphandle.
Lesi siqhingi siyindawo engavamile yokukhulisa izingane. Kuyasebenziseka ezinganeni ukuthi zidlale ngaphandle ngaphandle kokucindezelwa ngabantu bazo, njengoba isimo sezulu esivamile yonke indawo esizweni sivame ukuba mahhala kunoma ibuphi ubungozi. Ngokusobala, kungcono kakhulu kubantu abadala ukuba babheke izingane zabo ukuze zivikele noma iziphi izinkinga namanxeba.
Amazinga Wokunakekelwa Kwezokwelapha
Uhlaka lokunakekelwa kwezokwelapha eNyakatho naseNingizimu yeCyprus lufana nezinkambiso zomhlaba. Njengasezindaweni ezahlukahlukene kakhulu, ama-ex-pats angakhetha phakathi kwezinsizakalo zezempilo zomphakathi nezangasese.
Uhlelo Lukazwelonke Lokunakekelwa Kwezempilo lwesizwe lunikeza ukucatshangelwa kwamahhala kwemitholampilo ngenhloso yokudlulisa wonke umuntu. Abantu baseCyprus bokuziphilisa okuphansi abafanelekeli lutho noma imithi exhaswayo. Ukwelashwa kwezinhlekelele emitholampilo kahulumeni ephuthumayo kunikezwa ukuncoma wonke umuntu, kubandakanya nabangaphandle; noma ngabe kunjalo, izindleko zokwelashwa ezilandela ukuqonda kufanele zikhokhwe ngabantu abangahambisani nomthethosivivinywa ngokulindela ukwelashwa okuhambisanayo.
Zonke izindawo ezisemadolobheni eziyinhloko zinenhlangano yemitholampilo ephethwe uhulumeni kanye namakhaya ahlukahlukene asebekhulile, izikhungo zokuhlinzeka, nezinsiza. Indawo enkulu yezinsizakalo zezokwelapha ezimele yedolobha elikhulu ikhungathekile ngokuyisisekelo ngongoti abazimele abenza imikhuba yabo. Ingxenye engcono kakhulu ye-ex-pats ukuthi cishe bonke ochwepheshe bemitholampilo bathole cishe ucezu oluthile lokuzilungiselela kwabo phesheya futhi bayaxoxa ngesiNgisi.
Ngenkathi umkhuba wokunakekelwa kwezempilo obalulekile umangaza, abahlali abahlukahlukene abangajwayelekile eCyprus bafuna ukuphinde bavakashele izizwe zabo ezivela lapho kwenzeka ukuthi badlule ezinkambisweni zezokwelapha ezibalulekile noma badinge ukucatshangelwa okwengeziwe kwengqondo.
Ama-ex-pats amaNgisi afanelekela usizo lwezempilo lukahulumeni noma ngabe awafaki yini ohlakeni losizo lomhlalaphansi waseCypriot, inqobo nje uma behlangabezana nezinyathelo ezithile. Thatha lapha ukuze ujwayelane nalokhu.
Isivinini sezifo eziwumshayabhuqe nezifo ezingenakuvinjelwa esiqhingini besiphansi ngokuthembekile isikhathi eside. Abangaphandle abangena esizweni abadingeki ukuthola noma yimiphi imigomo.
Imininingwane eyisisekelo yobuzwe ngokutshalwa kwezimali kweCyprus
Utshalomali oluncane lwe Ubuzwe ngokutshalwa kwezimali eCyprus
Ubuzwe ngokutshala imali eCyprus
Isitifiketi sokwenza ubuNtu (“Ubuzwe”) noma imvume yokuhlala unomphela ngokuya ngohlelo
Icubungula isikhathi sobuzwe ngokutshalwa kwezimali eCyprus
Izinketho Zokutshalwa Kwezimali ze Ubuzwe ngokutshalwa kwezimali eCyprus
Kungani kufanele ubuzwe ngokuba utshalomali lwaseCyprus
ICyprus inendawo enhle kakhulu yezwe. Inezinhlelo ezingabizi kakhulu zamaphasipothi e-European Union. Ngemuva kokuba yisakhamuzi saseCyprus, ungahamba kalula emazweni we-150 ngaphandle kwe-visa. Uzoba nethuba lokuphila, ukuhamba nokusebenza kunoma yiliphi izwe lase-US. ICyprus ikunikeza indawo ephephe kakhulu. Kukhona izikhungo eziningi zokwelashwa zesigaba sokuqala. Izwe linezinga eliphansi kakhulu lentela uma kuqhathaniswa namanye amazwe e-EU. Ngaphezu kwalokho, iCyprus inohlelo olukhulu lwezemfundo. Izwe alidingi noma yiluphi ulimi noma izidingo zempahla.
Izinzuzo zepasipoti yaseCyprus ziyasebenza nasemalungwini omndeni asondele, angaba izingane ezingaphansi kweminyaka eyi-18, noma izingane ezingaphezulu kwe-18 ezincike kumnikazi wepasipoti. Kukhona amathuba okufaka owakwakhe esicelweni.
Ubuzwe Ngohlelo lokutshalwa kwezimali eCyprus
Inqubo yokufaka isicelo ingenye esheshayo emhlabeni. Kungathatha izinyanga ezi-3. ICyprus ayinayo imikhawulo yokuba yisakhamuzi sobabili. Awudingi ukuthi ube seCyprus ukuze ugcine ubuzwe bakho. Udingeka kuphela ukuthi uvakashele iCyprus njalo eminyakeni engu-7. Ngemuva kokuthola ubuzwe bakho uzothola zonke izinzuzo iCyprus ezingakunika zona.
Ukuze uthole ipasipoti yegolide yaseCyprus kudingeka ukuthi utshale imali eyizigidi ezingama-2 e-EUR ebuna ku-real estate, inkampani okufanele ibe nezakhamizi okungenani ze-5 eziqashiwe noma ezimpahleni zezimali zaseCyprus. Ungatshala futhi kukho konke lokhu ngasikhathi sinye. Ukutshalwa kwemali kufanele kugcinwe iminyaka engu-3.
Ngaphezu kwalokho, ubophezelekile ukuthenga indawo yokuhlala eCyprus ezobiza okungenani i-EUR 500,000. Kuzofanele ugcine leyo mpahla impilo yakho yonke. Uma ufuna ukukhetha inketho yokutshala izindlu nomhlaba intengo yaleyo mpahla izoba yingxenye yesidingo esincane sokutshala imali esingu-EUR 2 million. Uma kwenzeka unamagama abazali bakho noma owakwakho osetshenzisweni, abazali nabo kudingeka ukuthi bathenge izimpahla ezibiza okungenani ama-EUR 500,000. Noma, imibhangqwana ingathenga ndawonye impahla ebiza ubuncane be-EUR 1,000,000.
Izimali zikahulumeni zesicelo zingama-EUR 7,000 kuwo wonke umuntu omdala. Imali ekhokhwayo yokweluleka ingaphansi koshintsho olususelwa kubudala nenombolo yomndeni.
Ukusekelwa kwamakhasimende kobuzwe ngokutshala imali eCyprus
Ithimba lethu le- Ubuzwe ngama-Investment Agents eCyprus futhi Ubuzwe Ngokutshalwa Kwezezimali Abameli ngeKhupro inikeza amaklayenti nemindeni yawo eCyprus ukwesekwa kobuzwe ngokutshalwa kwezimali okuvela eCyprus, ukuhlala ngokutshalwa kwezimali okuvela eCyprus namanye amathuba okutshalwa kwezimali kwamanye amazwe, emazweni angama-37.
Sinikeza okungabizi Ubuzwe ngezinsizakalo zokutshala imali kweCyprus, ngokusebenzisa okungabizi kwethu ifemu yomthetho wokutshalwa kwezimali kanye nowokufika AbaseCyprus, abaceli bezokufika abatshalizimali abafinyelelekayo baseCyprus, Ubuzwe obungabizi ngabeluleki bezokutshalwa kwezimali eCyprus, ubuzwe obubizayo ngabameli bezokutshalwa kwezimali baseCyprus kanye nenkampani yokubonisana nabokufika engabizi
Ubuzwe ngezinhlelo zokutshala imali ezivela eCyprus.
Ubuzwe ngokutshalwa kwezimali kweCyprus ngeReal Estate
Sinikeza ukwesekwa kotshalomali bezindlu eCyprus ngombono wokuthi iklayenti kufanele lithole inzuzo enhle ekutshalweni kwezimali eCyprus, noma kunini, lapho bafuna ukuphuma ekutshalweni okwenziwe ngabo kobuzwe babo ngokutshala iCyprus. Sinokuhlangana nabathuthukisi bezindawo ezimbalwa eCyprus abanerekhodi elihle futhi impahla yabo isezindaweni ezinhle eCyprus, ilanda izimbuyiselo ezinhle kakhulu.
Udinga ukwazi - Ubuzwe baseCyprus Ngotshalomali
Ubuzwe Bommeli Wotshalomali baseCyprus buzonikeza ngemininingwane eningiliziwe yamadokhumenti kubuzwe bakho obuphumelelayo ngokutshala imali eCyprus. Izinsizakalo zethu ezijwayelekile zobuzwe ngokutshalwa kwezimali eCyprus zifaka:
Senza inkuthalo yokuqala efanelekile, ukulungiselela umbiko ngaphambi kokuncoma ubuzwe ngokutshala imali eCyprus kumakhasimende ngokuthola ubuzwe baseCyprus nokunciphisa ubungozi bokwenqaba.
Ukuze siqhubekele phambili nobuzwe bakho ngokufaka isicelo sokutshala imali eCyprus sizodinga amakhophi askeniwe epasipoti yamakhasimende namalungu omndeni.
Ukuhumusha kanye ne-apostille yemibhalo Ubuzwe ngokufaka isicelo sokutshala imali eCyprus. Abameli bethu abakhethekile bobuzwe ngokutshala imali eCyprus kanye ne-visa yegolide bazosiza ngokugcwalisa amafomu nemibhalo.
Lapho imibhalo yakho neyomndeni wakho yobuzwe ngokufaka isicelo sokutshala imali eCyprus seyilungile, sizoyigcwalisa ngeziphathimandla ezifanele zaseCyprus.
Lapho isicelo sakho sobuzwe ngokutshalwa kwezimali eCyprus sesamukelwe, sihlanganyela izindaba ezinhle nawe bese siqala ukulungiselela ezinye izisekelo.
Asibusekeli noma sibunikeze ubuzwe ngezinsizakalo zokutshala imali eCyprus kubantu ababalulwe ngezansi noma amabhizinisi eCyprus:
Ubuzwe ngezinsizakalo zokutshala imali eCyprus azinikelwa kubahwebi noma abasabalalisi bezingalo nezinhlamvu ukusuka noma ukuya eCyprus.
Ubuzwe ngezinhlelo zokutshala imali eCyprus ahlinzekelwa ukubhekwa kwezobuchwepheshe eCyprus noma ubuhloli bezimboni bezinhlelo zokutshala imali ngaphakathi noma ukusuka noma ukuya eCyprus.
Ubuzwe ngokubonisana ngokutshalwa kwezimali kweCyprus ahlinzekelwa noma yimiphi imisebenzi engekho emthethweni noma yobugebengu eCyprus.
Ubuzwe ngokusekelwa kotshalomali ngeKhupro akukhona okwabantu abasebenza ngezinto ze-Genetic eCyprus.
Ubuzwe ngezinsizakalo zokutshala imali eCyprus akukhona okwamabhizinisi asebenzisana ngezikhali eziyingozi noma eziyingozi zebhayoloji noma izikhali zenuzi eCyprus.
Ubuzwe ngohlelo lokutshala imali ukusekelwa kweCyprus akutholakali kubantu baseCyprus abasebenza ngokuhweba, ukugcina eCyprus, noma ukuthuthwa kwezitho zomuntu.
Ubuzwe ngokutshala imali ngeKhupro akuyona eyezinkampani zokutholwa ezingekho emthethweni.
Ubuzwe insiza yezinhlelo ngeKhupro akuzona ezenkolo namahlelo abo okusiza abantulayo eCyprus.
Ubuzwe ngezinsizakalo zokutshala imali ku Cyprus ayihlinzekwa kubantu abasebenza Izithombe Zobulili Ezingcolile eCyprus.
Ubuzwe Bethu abameli eCyprus awasekeli ukuhweba ngebhizinisi ngezinto zezidakamizwa eCyprus.
“Isaziso Esibalulekile : IMM Solutions INC ithatha ukunakekela okufanelekile ukuze iqinisekise imibhalo ye-AML yamakhasimende aseCyprus kanye neKYC yawo kepha asemukeli noma imiphi imithwalo yemfanelo yanoma ikuphi ukwenqatshwa yiziphathimandla eCyprus ukuvunywa kwesicelo se Ubuzwe ngokutshalwa kwezimali eCyprus.
Ubuzwe ngokutshalwa kwezimali eCyprus nakwamanye amazwe, kanye nokunye okuningi okusekelwayo.
Sinikeza ubuzwe obuhle ngokusekelwa kokutshalwa kwezimali eCyprus ngokutshalwa kwezimali, ukuthuthela kwamanye amazwe kanye nokuhlelwa kwezindlu eCyprus.
Isekelwa ubuzwe bamazwe ngamazwe ngolwazi lokutshala izimali nezimfuneko zomthetho zaseCyprus, sakha izixazululo ezinhle kakhulu.
Ubuzwe bethu ngezinsizakalo zokutshala imali eCyprus kunikela ngamanani ashibhile, ngenani lempumelelo elingafinyeleleka kahle eCyprus.
Sithathe isipiliyoni seminyaka yobuzwe bobabili eCyprus abasekela amaklayenti nemindeni yabo eCyprus.
Ubuzwe obunolwazi ngabaceli bezokutshalwa kwezimali eCyprus kanye nabameli bezomthetho baseCyprus abanikela ukwesekwa kumakhasimende.
Ngaphambi kobuzwe bakho beCyprus nangemva kokuvunywa, ilungu lethu leqembu eliphakeme lizoba lapho ngebhizinisi noma ukwesekwa komuntu siqu eCyprus
Sinokuhlangenwe nakho kwamazwe omhlaba kubuzwe ngokutshala imali kufaka phakathi iCyprus, ukusiza amaklayenti avela emhlabeni wonke ngezinsizakalo ezihamba phambili.
Uma kwenzeka, ubuzwe bakho ngokutshala imali eCyprus buhluleka, kunamanye amazwe angama-36 esiwasebenzisayo, sikulungele ngohlelo B.
Bala izindleko zobuzwe ngokutshalwa kwezimali eCyprus
Ukubala izindleko zobuzwe ngokutshala imali eCyprus sicela ugcwalise yonke imininingwane kufaka phakathi amalungu omndeni kanye neminyaka yabo. Ngenxa yenani elikhulu lamakhasimende eCyprus, siyakwazi ukuhlinzeka ngezinsizakalo ezingcono ngezindleko eziphansi. Izibalo zizofaka, izindleko, zobuzwe ngohlelo lokutshala imali eCyprus nezinye izindleko.
Ubuzwe ngokutshalwa kwezimali eCyprus nakwezinye izinsizakalo
Ngaphandle kobuzwe ngokubonisana ngokutshalwa kwezimali eCyprus, sihlinzeka ngamabhizinisi, i-IT kanye nezinsizakalo ze-HR naseCyprus, ongazitholi ngaphansi kwesambulela esisodwa esihlinzekwa abanye abaxhumanisi baseCyprus okusenza sithenge indawo eyodwa eCyprus kanye namazwe we-106.
Sisekela indlela yamakhasimende ethu edlula ubuzwe ngokutshala imali eCyprus ngosizo lwabameli bethu, ababonisi kanye nokubopha eCyprus nakwamanye amazwe.
Ngemuva kobuzwe ngokutshalwa kwemali ukuze ECyprus uma uhlela qala ibhizinisi ngokuthenga ibhizinisi elikhona eCyprus ukuqala ngokushesha eCyprus.
Ngemuva kobuzwe ngokutshala imali eCyprus, isethaphu ibhizinisi ku Cyprus.
Abameli Bobuzwe Ngokutshalwa Kwezimali eCyprus
Sinikeza ubuzwe obusemthethweni ngezisombululo ze-Investment zeCyprus futhi impumelelo yamakhasimende ethu ibaluleke kakhulu, eCyprus, singabaholi, inkampani yethu yabameli eCyprus inezinhlaka ezihamba phambili zokufika eCyprus, sinedumela lokuletha isipiliyoni esihle kakhulu sokuhlinzeka ngamakhasimende eCyprus nge Sula izixazululo zamasu okutshala imali kubantu baseCyprus kanye nemindeni yabo. Ubuzwe bethu ngethimba lokutshala imali eCyprus buhlinzeka ngezixazululo ezenziwe ngobuqili zempumelelo yeKlayenti.
Amandla wommeli waseCyprus ayadingeka kuzo zonke izenzo zomthetho ezenzelwe wena Ubuzwe ngabameli bezokutshalwa kwezimali eCyprus. Uma useCyprus noma uhlela ukuvakashela eCyprus, singathola amandla akho ommeli lapha.
Imibuzo Ebuzwa Njalo - Ubuzwe ngokutshalwa kwezimali eCyprus
Yiluphi utshalomali oluncane lobuzwe ngokutshalwa kwezimali eCyprus?
Ukutshalwa kwemali okuncane kobuzwe ngokutshala imali eCyprus kungu-EUR 2.15 wezigidi.
Ngabe unikeza ukusekelwa kwezomthetho kweCyprus yoBuzwe ngokutshala imali?
Yebo, ummeli wethu eCyprus kanye nabasebenzeli eCyprus banikela ukwesekwa kobuzwe ngokutshala imali eCyprus.
Ngabe ubuzwe ngokutshala imali eCyprus kuyabiza?
Izindleko zobuzwe ngokutshalwa kwezimali eCyprus kanye nobuzwe ngezidingo zesikhwama sokutshala imali eCyprus ezenzelwe abantu abaningi, sibiza imali yokubonisana ngobuzwe ngokutshalwa kwezimali eCyprus kuphela, siphinde sinikeze nezinye izinto eziningi ezisekelwa ubuzwe ngezisombululo ze-Investment.
Iziphi izakhamizi zezwe ezingafaka isicelo sobuzwe ngokutshala imali eCyprus noma nge-visa yabatshalizimali eCyprus?
Ubuzwe ngezinsizakalo zokutshala imali kungasetshenziswa izakhamizi zanoma yiliphi izwe kepha izibonelo ezimbalwa ubuzwe ngokutshala imali eCyprus kusuka e-Asia, Ubuzwe ngokutshala imali eCyprus kusuka e-Afrika, Ubuzwe ngokutshala imali eCyprus kusuka eYurophu, Ubuzwe ngokutshala imali eCyprus kusuka eNingizimu Melika, Ubuzwe ngokutshalwa kwemali eCyprus kusuka eMalaysia, Ubuzwe ngokutshalwa kwemali eCyprus kusuka eBangladesh, Ubuzwe ngokutshalwa kwemali eCyprus kusuka e-Indonesia, Ubuzwe ngokutshala imali eCyprus kusuka eSri Lanka, Ubuzwe ngokutshala imali eCyprus kusuka eNepal, Ubuzwe ngokutshala imali eCyprus kusuka eNdiya kanye nobuzwe ngokutshalwa kwemali eCyprus kusuka e-UAE.
Ubuzwe Obuqeqeshiwe ngokuHlelwa Kwezimali ngeKhupro
Cela ukubonisana kwamahhala kobuzwe bakho ngokutshala imali eCyprus
Amagama abalulekile kubuzwe ngokutshalwa kwezimali kweCyprus